Majaajilada Joomatariga - Diiwaanka ugu weyn ee 40 - Geofumadas
Joornaalada jimicsiga - Diiwaanka 40s ee muhiimka ah
Ogast, 2013 Baridda CAD / GIS, Featured, Geospatial - GIS
Joornaalada Geoodhiga ayaa si tartiib tartiib ah u kobciyay jadwalka sayniska kuwaas oo qeexaya wax badan oo ku saabsan horumarka teknoolajiyada iyo falsafadda sayniska ee ku saabsan sayniska dhulka. Isbedelada hadda jira ayaa lagu diley joornaalada la daabacay ee taariikhda weyn, waxay soo bandhigeen mawduucyada muhiimka ah ee daabacaadaha kale waxayna xidheen farqiga u dhexeeya waxa uu yahay majaladda caadiga ah oo leh daabacaad farabadan ee muuqaalada blogga. Qiimaha dheeraadka ah ee maareynta aqoonta iyo is-qabashooyinka ka dhexeeya jilayaasha ayaa noqday mid aad muhiim u ah, sidaa daraadeed doorka tafaftirka caadiga ah ayaa u wareegay isku-duwidda dhacdooyinka caalamiga ah, adeegga webinar iyo daabacaadda content-ka.
Waxay sheegeysaa kuwaas oo ah 40 ugu muhiimsan, waana ka sii badan haddii ay doonayaan in la kala saaro. Sidaas Wakhtigan oo kale ayaan isticmaali doonaa shuruudaha qaar ka mid ah in qiil cabbirka dhex-dhexaad ah, cadeeyo in aanay ka publications oo keliya ku saabsan arrintan, laakiin waxaa la filayaa inuu noqdo biloowga kuwa jecel akhriska iyo shirkadaha doonaya warbaahinta si wadajir ah.
Waxaa kale oo muhiim ah in la xuso in qaabka "joornaalka" uusan qasab aheyn midka aan fahmey illaa iyo hadda, laga yaabee inay fiicnaan laheyd in la yiraahdo "daabacadaha joomatari" sababta oo ah maanta in ka badan qiimeynta qaabka aan ku siineyno dhibco badan faa'iidooyinka goobaha internetka. qaababkeeda kala duwan; shirarka, baloogyada, xariiryada, joornaalada, wikis ... wadajirka ayay isu buuxiyaan.
Waxaan isticmaalaa cabbirka Alexa, taariikhda 15 ee Agoosto ee 2013. Darajadani waa mid firfircoon oo isbadal ku yimaada wakhtiga ku xiran hababka wanaagsan ama xun ee bogagga iyo isbeddelka algorithms ee Google.
Guud ahaan, uma eka wax akhristayaasha ama booqdayaasha, laakiin waxay astaan ​​u tahay caafimaadka goobta.
Hoosudhaca dakhliga Alexa, waa ka fiicnaan, sidaas Facebook.com iyo Google.com badanaa waxay ku jiraan labada lambar ee hore. Ma fududa inaad ka hooseyso heerka 100,000 iyo inkasta oo ay jirto darajo kale oo dalka ka jirta kiiskan waxaan jeclahay in aan sameeyo iyada oo adeegsaneysa midka caalamiga ah, taas oo muujinaysa miiska u dhigista Spain sida macluumaad dheeraad ah.
Waxaan u adeegsaday wadarta 40, oo loo kala soocayo liis darajo 7,000,000. Inkastoo taasi tahay meel aad u geeriyootay goob, waxaan halkaas ku sii fidiyay si aan u cabbiro kororka joornaalada qaarkood oo u qalma nasiib wanaagsan.
21 ee majaladdan waxay ku qoran yihiin Ingiriis. Inta badan waxay ku qoran yihiin a liiska joornaalada yaryar in aan daabacay waqti hore; inkastoo wakhtigaas oo kaliya lagu xusay 9 iyo kuwo kale oo liis ah, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah kuwa ay leeyihiin shirkado ku hawlan soo saaridda qalabka ama codsiyada.
8 waxay ka soo jeedaan astaamaha Hispanic, kaliya kuwa rikoodhada ku jira miisaanka la xushay. Dhammaantood Isbaanish, marka laga reebo Geofumadas oo leh qaabka Ingiriisiga. Halkan liiska ayaa si fiican loo yaqaan, iyada oo kala duwanaanta ay ku jiraan Cartografia.cl oo aan waligeed aan soo sheegnay.
7 waxay ka mid yihiin asal ahaan Brazil, iyada oo tixgelinaysa in ay tahay macnaha guud ee isku dhafan. Dhammaanba af Portuguese, oo leh kala duwanaansho MundoGEO oo leh qayb ka mid ah Ingiriisi iyo Isbaanish. Raaligayga aan u leeyahay asxaabteyda Rio de Janeiro, laakiin waa liiska aan ku ogaanayo, hubaal waxaa jira mid kale oo agagaarka ah oo leh darajo fiican.
Ugu dambayntiina waxaan ka mid ahaa wargeysyada 4 5 aagga Denver, kuwaas oo dhawaan ku biiray kooxda loogu yeero Location Media Isbahaysiga - LMA. sidoo kale waxay ka mid yihiin Ingiriisi, laakiin qaar ka mid ah la isbahaysiga magacooda iyo domain bedelay, si ay u lahaa in ay ku dhow bilaabi ka koritaanka eber, waayo, xaalkan in, dareemayaal & Systems iyo Infraestructures Ka Warqab yihiin waxa mar ogaa sida Vector1 iyo Vectormedia. Sababtoo ah darajadeeda, ma muuqato liiska Spatial Apogeo, kaas oo loo adeegsan jiray in lagu magacaabo Sawirada Sawirada. Waxa ay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko koritaanka, tan waxa ay taasi ku saabsan sano ah baar ku yaala Amsterdam tashanin mid ka mid ah qadayn ay sida ZatocaConnect / Z! Goobaha ... model iyo muddo baan u arkay wax fikrad ah soo bixitaankii AML .
Kuwa reer Brazil waxaa lagu calaamadiyay cagaaran, kuwa Isbaanishka ah ee orange iyo kuwa ku jira Alliance ee buluuga ah.
Jaantusku ma matalayo joornaalada ugu horeeya ee 4 maxaa yeelay waxay lumisaa dareenkiisa aragtida sababtoo ah heerka sare ee ka hooseeya 100,000.
1 directionsmag.com 17,463 Qiimeynta Spain
Waxay ka sarreysaa iyada oo aan la yaabin Jihooyinka Jihooyinka ee waa dabayl, oo leh darajo khayaali ah oo 17,000 ah. Ka dib markii uu isku dayay inuu ku guuldareysto qaabkiisa uu ku ciyaaro Isbaanish, wuxuu go'aansaday inuu xoogga saaro booskiisa mudnaanta leh isla markaana uu la midoobo MundoGEO koonfurta koonfureed.
Waa markii ugu horeysay ee la yiraah "Mapsmaniac" oo hore loo yaqaan "Google Maps Mania, oo sanadkan sameeyay isbeddelka domainka iyo inkasta oo aysan haysanin calaamad aad u liidata waxay ku guuleysteen inay raadiyaan kuwa ixtiraamaya dhawr bilood oo kaliya. Sidoo kale la yaab leh waa Iskuduwaha, kuwaas oo si adag u shaqeeyay sanadkan si ay u muuqdaan mashiinka raadinta iyo ka adkaado dad badan.
Fiiri in tani ay tahay mid firfircoon, waxaad arki kartaa sida mapmaniac ee laga bilaabo May laga bilaabo domain cusub; iyo sidoo kale Iskuduwaha.
Inta kale ee safka Ingiriisku waa GIS Cafe, Gis Lounge, GPS World iyo CIS.
Waxay ku qanacsan tahay in MundoGeo uu ku jiro booska 5aad iyo qaybta Isbaanishka waxaa ka mid ah Franz Blog (9) iyo Geofumadas (10) gudaha 10.
Halkan Cartesia (11), Gabriel Ortiz (15) muuqan. Waxaa macquul ah sababaha labada goobood ee halyeeyada ah ee ka muuqda mawqifaadyadani waxay u egtahay la'aanta cusbooneysi kubadeed, kala-gaabinta goobaha kala duwan ee maamulayaasha xogta, ama xaqiiqda sahlan ee ah inaysan ku dhicin waxyaabaha sababay Google ee ciqaabtay markii qaar ka mid ah.
Solitario waxay u muuqataa barta Of Anderson Madeiros (Click Geo) ee booska 14 iyo Gerson Beltrán ee 17.
12 ballonline.com 818,868
20 gim-international.com 1089,629 Koobka Spain
Horeba liiskan ayaa ah laba goobood oo dheeraad ah oo luqadda Isbaanishka ah, MappingGIS oo sii kordhaya ka dib markii ay gabagabadan yihiin gabdhahaan sanadkaan, iyo Sahaminta Asia & Khariidadaha oo ah daabacaadda ugu sarreeya ee LMA. Dareemayaal & Systems u muuqataa in booska 30 ah, waxaa ka fiirsaneysa magac cusub, waxaan kori doono dhaqso badan ASM.
22 lidarnews.com 1198,105 Koobka Spain
Ugu dambeyntiina, safka wuxuu u muuqanayaa labada majal ee kale ee LMA. Ka dibna waxaan ku darayaa warbaahinta Geospatial ee liiska ay leedahay, inkasta oo tani ay tahay shirkad la mid ah Hindiya oo soo saaraysa Geo Intelligence, iyo in la soo saaro waxyaabaha ka soo baxa ee Geo.
Macnaha Isbaanishka waa Cartografia.cl (33), Orbemapa (39) iyo saddex meelood oo Brazil ah.
38 warfaafinta 5014,245 -
Gebogebada, waa muhiim in la badbaadiyo joogitaanka 8 goobaha luqadda Isbaanishka ee ku dhex jira liiska adag ee isha. Ilaa inta suurtagal ah, waxaanu daba socon doonnaa qoraalkan si aan u ogaano casharadii laga bartey khibraddan cusub ee majaladda jimicsiga.
Sida loo hagaajiyo Alexa liiska
Maaha hadafka maqaalkani, laakiin taladu waxay u adeegi kartaa qof kasta. Guud ahaan, waxaa jira dhowr khibradood oo shaqeynaya:
Sida ugu wanaagsan, iska ilaali isticmaalka subdomains; Ma aha isku mid in la helo bog site blogspot ama wordpress.com marka loo eego domainka adiga kuu gaar ah.
Sidoo kale goobaha waa in laga diiwaan geliyo Alexa waxayna raacaan talaabooyinka lagu dalbanayo qoraaga.
Si joogto ah u qor. Wakhtiga lumay waqtiga aragtida sida tirakoobku hoos ugu dhaco kama caawineyso.
Akhri farsamooyinka naqshadaynta. Maalgelinta SEO-ga waa ikhtiyaar wanaagsan, laakiin waa inaad barataa sidoo kale koleejka aan ka baranay waxyaabo badan oo adag.
Ka fogow farsamooyinka laga yaabo inay ciqaabtamaan goobta; Mid ka mid ah waa inay ka baxaan.
Ugu dambeyntii: nala soo qor, waxaynu leenahay khibrado ay noo shaqeyn jireen. tifaftiraha (at) geofumadas.com
Sure waxaa jira majalado kale oo aan la soo sheegin, qaar ka mid ah oo leh darajo ka baxsan xadka xadidan. Haddii aad mid hesho ... soo sheeg.
Warbixin cusub oo lagu qoray 2019
Post Previous«Previous Dawlad Geedi: Habka LGAF
Post Next Isbarbardhiga GPS - Leica, Magellan, Trimble iyo TopconNext »
12 Jawaab ah "Majaajilada Joomatariga - Qaybta 40 ee muhiimka ah"
Nantika isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, kahor intaadan mahadcelin u ogolaanaynin inaad iiga dhiibto faallo, waxaan aad u danaynayey kan ugu dambeeya ee ah sidii loo horumarin lahaa darajayn la galiyay, runti waxaan dhowaan ka shaqeeyaa «a newbie on the maadada» oo waxaan tixgalin doonaa qodobbada aan soo sheegay waxaanan rajeynayaa inaan ku taliyo kaalmadaada Haddii ay suurtagal tahay, waxaan horey u qorey iimaylkaaga geomfumadas, waxaan u qori doonaa si aan u helo caawinaadaada dabcan khiyaamadaada qaar, waad ku mahadsan tahay wadaagida macluumaadkan qiimaha badan
Santiago isagu wuxuu leeyahay:
Nofeembar, 2013 at
publicacoion Interesting, waxaan doonayaa in aan ogaado haddii aan loo fududeeyo karaa mail Franz xq ayaan qoray oo aan ii jawaabay, kaliya waxaan doonayaa in aan ogaado sida ay u sameeyey si kor loogu qaado boosaska badan ee Alexa fiican tahay inaan la wadaagno tricks ku xusan.
Edwin Ortega isagu wuxuu leeyahay:
Sebtembar, 2013 at
Xaqiiqdii kaalin weyn, wax badan ayaan heystaa bogag intaa ka badan oo aan ku soo booqdo, haddii aanad ku dhicin inaad cusboonaysiiso liiska ama auqneu midka ugu sareeya ee 5 ama 10. Waad ku mahadsantahay shaqadaada.
Waanu tijaabin doonaa aragtidaada.
Franz isagu wuxuu leeyahay:
Ma ahan mid si adag loogula hadlayo, halkii kaliya lagu rakibi lahaa baararkaaga iyo ku daridda aalad, marka aad gasho bartaada oo "hagaajiso" jagooyinka, markaa shaqsi ahaan ma aamini karo Alexa, waxaan door bidaa inaan hagaajiyo bogga tixgaliso jagooyinka makiinadaha raadinta iyo sidii loo sii horumarin lahaa waxay u baahan tahay dadaal dhab ah, sidaa darteed haddii aan uninstall-ka barku si toos ah u bilaabo asalkayga.
Aad u run ah. Waayo-aragnimadayda, waxaan ku arkay goobaha inay ku koraan iyadoo aan laga xusin Geofumadas. La yaab malahan qiyamka lagu qiimeeyo qiimeynta ee lagu xusay laba toddobaad gudahood. Taasi waxay dhacdaa maxaa yeelay waxaad qiimeyso waa caafimaadka goobayaasha.
Ka taxadar ... Waxay u baahan tahay wax badan oo ka badan oo la sheego.
Waa wax yar oo la isticmaalo si aad u hesho booqashooyinka ah in sirta sare ay kuu soo diraan haddii dadku aysan wakhti wakhti wakhti u helin mawduuca.
Fran isagu wuxuu leeyahay:
Sidaas daraaddeed waxaan idinku leeyahay waa darajo manipulable tan iyo markii aad la daabacay this post, oo aan dadaal badan ayaan u suurtagashay in ay hesho qiimo ka hooseeya 400000 ah, inkastoo mar dambe muhiim ah, isku halaynta weyn ayaa PageRank ah, mid aad u adag in ay la tacaalaan iyo kharashka badan shaqeeyaan si loo hagaajiyo booska.
Haa, waxaa jira farsamooyin lagu daryeelayo tilmaamayaasha saameeya Alexa. Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd shuruudaha aan helay.
Waad ku mahadsantihiin sharraxaadda iyo shaqada aad korto, inkasta oo darajooyinka warbixinta la hayo ay tahay mid la fududeyn karo laakiin sababtaas awgeed ma joojinayso in ay muhiim tahay, sida muuqata taariikhda aan hadda ku soo kordhiyay labo boos.
Waan ku raacsanahay qaabkaaga; Darajadu waa hal dariiqo oo lagu cabbiro caafimaadka barta. Laakiin xaqiiqdii shirkad kastaa waxay heshay dariiqooyin ay ku kasbato qaababka kala duwan ee daacada ee hadda u matalaya aaladaha maaraynta aqoonta, shabakadaha bulshada iyo liisaska macaamiisha.
Waxaa laga yaabaa in hal maalin aanu samayno baaritaan sidan oo kale ah.
Alberto Santos isagu wuxuu leeyahay:
Aad u xiiso leh Golgi,
Xittaa xiiso badan ayaa noqon lahaa in la arko faa'idada goobahaas. Ka sarreeya darajo Alexa ayaa ah qaababka loo isticmaalo booqashada booqashada goobta ... xitaa marka goobaha hore loo xiray.
Alberto Santos Estevez isagu wuxuu leeyahay:
Xitaa xiiso badan ayaa noqon lahaa in la arko sida faa'iido leh udubdhexaadiyeyaashu yihiin. Qaabka samaynta ee booqashadu waa qiimaha dhabta ah ee bogagga ... xataa marka ay xiranyihiin.